Ogaden News Agency (ONA) – Feejignaanta shacabka S.Ogadenya iyo dhulboobka ka socda Itobiya – Cabdi Bashiir Cabdi
Feejignaanta shacabka S.Ogadenya iyo dhulboobka ka socda Itobiya – Cabdi Bashiir Cabdi
Posted by ONA Admin	/ October 23, 2013
Wadanka Ogaadeeniya oo sida aan lawada socono kamid ah wadamada tirada yar ee ilaa iyo hada baaqiga kusii ah gacan gumaysi, ayaa waxaa kasocda halgan gobanima doon ah oo shacbiga Somaalida Ogaadeeniya ay ku doonayaan inay iskaga dulqaadaan heeryada gumaysiga madow ee Itoobiya. Tan iyo intii uu gumaysigu hantiyay dhulka Somaalida Ogaadeeniya, laga soo bilaabo qarinigii 18 aad waxaa kajiray Ogaadeeniya kacdoono kala duwan oo gobanimadoon ah, kuwaasi oo hal ujeedo iyo hal hadaf ka sinaa,, kaasi oo ahaa in Dalka, Diinta iyo Dadka Somaalida Ogaadeeniya laga xoreeyo gumaysiga sida gardarada ah ku qabsaday gayiga Ogaadeeniya.
Hadii aan hoos ugu dhaadhaco ujeedada maqaalkaygan oo ku aadan booqashadii xukuumada gumaysiga Itoobiya ku tageen caasimada wadanka Ogaadeeniya ee magaalada Godey todobaadkii lasoo dhaafay. Waxay booqashadan oo sida lasheegay salka ku haysa sahamin iyo indho indheyn waxa loogu yeedhay maalgashi lagu samaynayo wadanka Ogaadeeniya, gaar ahaana gobolka Shabeele. Tagitaankaa qaar kamid ah madaxda gumaysatada Itoobiya ee magaalada Godey waxay daaha ka qaaday inay wali jirto riyadii gabowga ahayd iyo damicii qaldanaa ee gumaysiga Itoobiya ee ku dhisnaa dhul boobka iyo dal balaadhsiga. Damacani waa mid waligiiba ku jiray xukuumadihii kala duwanaa ee soo maray Itoobiya, hasa yeeshee mayna u suurto galin riyadaas iyo damacaas ku dhisan dulmiga iyo dhulbalaadhsigu. Waxaa markasta ka hor imaanayay kacdoono xaq u dirir ah oo fashilinayay damaca gumaysiga ee ku aadan Ogaadeeniya. Halgamadii qori isu dhiibka ahaa ee aan ka dhaxalnay awoow yadeen waxaa asal u ahaa difaacida sharafta, diinta , dalka, dhaqanka, khayraadka iyo jiritaanka dadwaynaha reer Ogaadeeniya. Waxaan marnaba shaki ku jirin in dadka somaalida Ogaadeeniya ay difaacan donaan dhulkooda daahirka ah iyaga oo aan ukala hadhin. Marnaba lama waayayo halyayo aragti dheer leh oo ka dhiidhiya xumaatada iyo sharaf dhaca dadkooda loo maleegayo.
Waxaa hubaal ah in jillka cusub ee maanta jiraayi ay ku baraarug sanyihiin halganka iyo soyaalka taariikheed ee dhulka Ogaadeeniya. Maal gashiga ay xukuumada Woyaanuhu ku hadaaqayso wuxuu salka ku hayaa sidii loo dhexli lahaa ciida sharafta badan ee Ogaadeeniya, khayraad keedana loo dhici lahaa. Waana habkii loola dhaqmay qoomiyada Gambeela, midaasi oo dhaxalsiisay bulshada gambeela in laga mooro duugo dhulkoodii oo dadkale dusha looga keeno. Sidaan la wada socono gudaha Ogadeniya waxaa Gumaysiga ka jooga ciidamo oo kali ah marka laga reebo qarka mdi ahaa xasaska cidamadaasi , waxa uuna in badan ku hamiyay Gumaysigu inuu gudaha Ogadenia ku beero shacab Itoobiyaan ah si dhulka ay u dhistaan ileen dhul ninkii dhistaa iska lehe ha yeeshee sidan kor ku soo xusnay waxa hor istaagay hamigaas Shacabka Soomalida Ogadeniya ee geesiga ah, hadama arintaasi markay socon wayday waxa uu bilabay Gumaysigu inuu keeno sheeko kale oo lagu marin habaabinayo shacabka Somalida Ogadenia gaar ahaan inta dabaqoodhiga ah ee dhuudhi qatayasha ah,waxayna bilaaben inay dhahan waxaan samaynaynaa maal gashi iyo waxan kenaynaa shirkado shisheeye iyo kuwa Itoobiyan ah hadama arintaasi maxuu ka faidi karaan shacaba Somalida Ogadenia hadii xukumada Gumaysigu Cashuur ka qadato shirkadahan iyo lacago dheeraad ah?
Hamiga gumaysigu waa inuu tirtiro jiritaanka umada reer Ogaadeeniya hantiyana dhulka daahir ka ah ee somaalida Ogaadeeniya. Himilada shacabka reer Ogaadeeniyana waa inay ka xoroobaan gumaysiga cudwaaniga ah ee Itoobiya, waa (maan barey iyo maan bilaal).
Cabdi Bashiir Cabdi